“Resy Lahatra” ny Parlemanta ao Iràka Hoe Tsy Misy Kolikoly Ao Amin’ny Ministeran’ny Fahasalamàna. Fa Toy Izany Koa Ve ny Vahoaka Irakiàna? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Mey 2017 11:22 GMT
Pikantsarin'ny resak'i Adilah Hamoud momba ire fiampangàna fisianà kolikoly ao anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamana. Loharano: Youtube
Rakitsary iray no nivezivezy tany anatin'ny haino amanjery sosialy Irakiàna momba ny fety fandraisana makotroka natao ho an'ny minisitry ny fahasalamana, Adilah Hamoud, mpikambana ao amin'ny Fiarahana Mitantana Tany Tan-dalàna sy ny National Alliance ao Iràka, antoko mitondra amin'ìizao fotoana izao, taorian'ny niverenany avy namaly ny fanontanian'ireo mpanao lalàna momba ny olan'ny kolikoly.
Sarinà lehlahy iray mikapa ondry eo alohan'ny fiaran'ilay minisitra no anombohan'ilay lahatsary, izay fomba fanao nentindrazana rehefa fotoam-piravoravoana. Taty aoriana kely, afaka hita ireo sasany mandihy sy miarahaba an'i Hamoud.
Kanefa, tsy ny rehetra no faly tamin'ny fiverenany na ny zavatra vitany.
Hamoud, nomen'ireo mpanakiana azy ny anaram-bosotra hoe ilay minisitry ny fahafatesana noho ny tsy firaharahàny ny fahasalamàna na fiadanan'ny Irakiàna, dia niatrika andro maro fakàna am-bavany tao amin'ny parlemanta momba ny resaka kolikoly ao anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamana.
Nihodinkodina tamin'ireo fifanarahana fafy katrana marobe nataon'ny governemanta ny sasany tamin'ireo fanontaniana. Ny mpikambana ao amin'ny parlemanta, Awad al-Awadi, avy amin'ny antoko al-Ahrar (rantsana ao anatin'ny antoko National Alliance ao Iràka ihany koa), dia namboraka fa an-tapitrisa no nolaniana nividianana fandriana, latabatra fanao an-dohafandriana, ary boatim-panafody sy fitaovana sy azo ampiasaina afa-tsy indray mandeha na teo aza ny tsy fahampian'ny fanafody tena ilaina.
Nahariharin'i Awadi ihany koa ny fifanarahana iray tsy mampino nifanaovana tamin'ny orinasa Portiogey iray izay nividianana kiraro 26.140 fampiasan'ny mpitsabo, mitentina 27 dolara amerikàna ny an'olona iray. Nambarany fa amidy 2 dolara ny kiraro tsy misy hafa amin'ireo ihany ao Iràka.
Na teo aza ny ahiahy mitombina, nisafidy ny ho “resy lahatra” ry zareo ao amin'ny parlemanta manoloana ireo valintenin'i Hamoud.
Olana ara-pahasalamana anatin'ireo fiampangàna fisianà kolikoly sy tsy fahaizana mitantana
Tsy vao izao i Hamoud no niharan'ny fanenjehana noho ny fiahiahiana azy ho manao kolikoly ao anatin'ny ministeran'ny fahasalamana.
Tamin'ny taona lasa, efa notatatatain'ny Irakiàna ny kolikoly sy ny tsy fahaizana mitantana izay nitondra tamin'ny firehetan'ny hopitaly iray sy fahafatesana zazamenavava tsy tonga volana niisa 13 tao Baghdad. Noroahan'i Hamoud ny talen'ilay hopitaly mba ampitoniana ny vahoaka ary nandroso fametrahana fialàna izy raha toa hita amin'ny fanadihadiana fa antsirambina no anton'ilay fahamaizana. Tany amboalohany ny minisitry ny fahasalamana dia nilaza fa afo nateraky ny herinaratra nifampikasoka ilay izy; kanefa, taty aoriana ry zareo namoaka famintinana fa niniana natao ilay afo. Lazaina fa nisy kaomity iray mpanadihady nahita fa hoe solika no nampiasaina hanombohana ny fandoroana ilay toerana nisy ny loza.
Na teo aza ny valin'ireo fanadihadiana, tsy azo lavina ny tsy fahampian'ny tolotra araka ny tokony ho izy amin'ny fikarakarana ny fahasalamana ao amin'ny firenena. Tamin'ny lahatsoratra iray nivoaka ny 2009, nofaritan’ilay mpanao gazety, Corinne Reilly, ireo tena olana maika atrehan'ny rafitra fiahiana ara-pahasalamana:
Efa fanaon'ireo mpiasan'ny ministeran'ny fahasalamana ny manimbina amin'ireo fanafody avy amin'ny taratasim-panafody alefan'ny hopitaly mba ho avadika vola fanampiny eny amin'ny varomaizina. Dolara an-tapitrisa natao ho an'ireo klinika sy ho an'ny fampitaovana no nanjavona. An-tapitrisa maro ihany koa no nolanilaniana fahatany taminì'ireo fifanarahan'ny governemanta hividianana fanafody lany andro.
Mitohy mijaly vokatr'ireny olana ireny ny rafitra fiahiana ara-pahasalamana, ary ny fihazakazaky ny olana amin'ny maha-olona noho ny ady misy amin'izao fotoana ifanaovana amin'ny vondrona ISIS dia nametraka tsindry fanampiny ho eo ambonin'ilay rafitra izay efa montsana rahateo. Dr. Margaret Chan, tale jeneralin'ny OMS, namaritra ny olana ara-pahasalamana ao Iràka ho zavadoza. Ho an'i Chan, ny fahasalaman-bahoaka ao amin'ilay firenena, ny rano, ny fotodrafitrasa ho an'ny resaka fahadiovana dia samy mikororosy avokoa ary mitombo ireo aretina azo sorohana, toy ny kitrotro sy ny kolera.
Lasa tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy mihitsy ny rafitra fiahiana ara-pahasalamana ka nampitodika ny Irakiàna ho amin'ny fivahinianana hitsabo tena any amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina aminy, toa an'i Jordània, Iràna, Tiorkia, eny fa hatrany India lavitra any aza, ary amin'ny tranga sasany dia ny governemanta no mandoa ny saram-pitsaboana any ivelany, toy ny tatitra nataon'i Adnan Abu Zeed tamin'ny 2015 ho an'ny tranonkalam-baovao Al-Monitor.
‘Mino ny governemanta fa fiahiana ara-pahasalamana zara fa misy no mendrika ho an'ny vahoaka’
Ho an'ny Irakiàna marobe, ny fanapahankevitry ny parlemanta hinia tsy hijery ireo olana ao anivon'ny ministeran'ny fahasalamana dia efa ohatra iray amin'ny fandeferana ny fisian'ny kolikoly ataon'ny governemanta ao amin'ny firenena.
Ny rafitra fitsinjarana fahefana politika ao Iràka, na “Muhasasa”, noterena hapetraka taorian'ny fananihambohitra amerikana tamin'ny 2003 dia afaka, amin'ny ampahany, manazava ny anton'ny mahatonga ny fandinihana ny kolikoly ho vitan'ny fanaingàna soroka fotsiny fa tsy misy hetsika atao. Ilay rafitra dia noheverina ho fisorohana ny fifandonana amin'ny alàlan'ny fiantohana ny hananan'ireo vondrom-poko sy finoana lehibe ao Iràka ny anjarany ao anatin'ny rafitra politika ao an-toerana.
Saingy raha naka ny anjarany taminìny rafitra fiahiana ara-pahasalamana tao Iràka ireo taompolo nisian'ny famaizana sy ny ady tao an-toerana, ny kolikoly tsy mitsahatra no mbola manohy manempotra izay rehetra mety ho fanatsaràna atao. Izany mihitsy, araka ny nohazavain‘i Nussaibah Younis, mpiaradia amin'ny Ivontoerana Amerikàna Fakankevitra ao Afovoany Atsinanana:
Ny olana dia mibahana ny governemanta ihany koa io tsy ho afaka hiasa amin'ny fomba mahomby. Raisin'ireo vondrona isanisany ho toy ny fanomezana miendrika kianja filalaovany manokana ireo ministera, amin'ny fampiasana azy ireny hanaparitahana vola etsy sy eroa sy hanomezana toerana ireo tsy mpivadi-belirano amin'ny antoko ary ireo mpikambana manandanja. Namorona governemanta iray tena tsy mahavita manome manontolo ireo tolotra fototra angatahan'ny vahoaka Irakiàna io.
Nitodika tamin'ny haino aman-jery sosialy ry zareo Irakiàna mba haneho ny hasosorany tamin'ilay fanapahankevitry ny parlemanta.
Tsy misolo tena ny tolon'ny vahoaka ny parlemanta satria manohana mandrakariva ireo miasa manohitra ny vahoaka.
Ny fahafahampon'ny parlemanta tamin'ireo valinteny naroson'i Adilah Hamoud dia midika fa fiahiana ara-pahasalamana zara fa misy no mendrika ho an'ny vahoaka avy aminà ministera mpanao kolikoly.
Ny sasany haingana be tamin'ny fanipihana fa mbola lafo lavitra noho ny barikan-tsolika iray ilay kiraro novidiana ho an'ny mpitsabo tsirairay voalaza ery ambony.
$25 no vidin'ny barika iray amin'ny solika dia ianao nividy kiraro ho anà mpitsabo iray misanda $27, kiraro ho an'ny atidoha no tokony hovidiana ho anao.
Ny kaonty Twitter “Iraq First” dia nizara sarimiaina iray izay manisy tsindrimpeo amin'ireo laharampahamehana diso toerana ao amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Ny kiraro fitondran'ny mpitsabo dia mifandray amin'ny IV an'ilay marary miaraka amin'ny maribolana hoe : “Tsy misy zavatra manandanja be ankoatry ny fahasalamanao.”